Linux Mint 14 dia hatao hoe Nadia | Avy amin'ny Linux
Linux Mint 14 dia hatao hoe Nadia
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nohavaozina tamin'ny 28/09/2012 22:41 | Fitsinjarana, About us
Satria ve nadie hampiasa azy io? 😀 Manalavitra ny vazivazy, Clem vao nambara tao amin'ny Bilaogy Linux Mint, izany ny kinova manaraka amin'ity fizarana ity (mifanaraka amin'ny Ubuntu 12.10) dia hanana anarana kaody: Nadia.
Azonao jerena ao amin'ny bilaogy ny anton'ilay anarana (manantena amin'ny teny rosiana, marefo, malefaka amin'ny teny arabo), ary toy ny mahazatra, ity kinova ity dia hanana ny karazany ao kanelina, VADIKO, KDE y Xfce. Ka fantatrao, Linux Mint Nadia afaka volana vitsivitsy 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Linux Mint 14 dia hatao hoe Nadia
ady lelafo eo imasony…
Miaraka amin'ny Mint dia tsy mieritreritra aho ... raha toa i SolusOS, xDDDD
Fiasco inona no tadiaviko lelafo. ¬¬
SolusOS minono. Ok, vonona, atambatra izany.
Mijanona kely, mila bard ianao? Mitroka i Debian sy Vim !! (!?)
(Aleoko mandeha toy izay mahita azy tonga any elav miaraka amin'ny antsy eo anelanelan'ny nifiny ...)
Mijanona, mpampiantrano toy izany izay miditra. Aiza ny mpanelanelana?
(Tsy mandrara izahay na dia manipy propellant ranon-javatra aza izy ireo)
Mahatsiro tsiro Mint, na dia ilay distro niandrasako tamim-pitaintainanana aza - ary miahiahy bebe kokoa aho - efa ela dia ny Elementary OS Luna 🙂
kasymaru dia hoy izy:
Hehe miandry an'io distro io koa aho.
Toa hahagaga ny maro ny mpamorona amin'ny fivoaran'ny GALA izay nihatsara tamina fampiratiana, fampidirana amina tabilao, fikandrana varavarankely ary ny fahitana ny birao, koa namorona rindranasa vaovao maromaro nokasain'izy ireo hapetraka ao amin'ny Luna + 1 izy ary pantheon dia milamina, Heveriko fa amin'ny volana oktobra dia mety hahita ny Elementary Luna natomboka tamin'ny zavatra vaovao maro isika.
Na izany na tsy izany, mandritra izao dia hiandry, hitsapa ary hitatitra bibikely! hehe 🙂
Ny olana hitako fotsiny amin'ny ElementaryOS dia raha hitarika ny famoahana Ubuntu izy ireo dia tsy afaka handroso mihitsy.
Vitsy dia vitsy ny mpamorona, mampihatra fanatsarana maro sy fampiharana vaovao, mandritra ny fotoana fohy eo anelanelan'ny famoahana. Amin'ity karazana tranga ity dia heveriko fa tsara indrindra ny manao zavatra toa an'i Debian, manana kinova azo antoka ary avy eo mamorona kinova fitsapana.
Raha ny marina dia tsy hanao afa-tsy kinova vaovao isaky ny LTS izy ireo, izany hoe isaky ny 2 taona. ElementaryOS dia heverina fa LTS MAFY.
Hmm, sarotra tokoa ny manavao izany avy eo, raha LTS fotsiny izy ireo, dia mahamenatra ny miaina miaraka amin'ny voan-javatra taloha sy ny fampiharana ho an'ny lahasa birao mahazatra ...
Noheveriko fa mamaky lahatsoratra MuyLinux ianao.
Manantena an'ity distro ity aho
–Ny olana tokana hitako amin'ny ElementaryOS dia raha toa ka hitarika azy ireo amin'ny alàlan'ny fanombohana Ubuntu, -
Eto aho dia mieritreritra fa tsy olana loatra ny hoe mifototra amin'ny LTS izy ireo, afaka 5 taona izy ireo hiasa amin'ny fanatsarana.
Hahaha tiako ny vazivazy an'io anarana io.
Ah, ny kinova KDE koa? amin'ny fiheverana fa kinovan'ny vondrom-piarahamonina io ary navoaka ela be taorian'ny andiany ofisialy ...
Raha tsy misy ny fikasana hanafintohina olona ... Tsy mbola tiako ny distros azo (izay tsy midika hoe tsy manana ny tombotsoany ho an'ny mpampiasa X), ary mainka fa ireo izay avy amin'ny hafa izay avy amin'ny fizarana hafa ... redundancy sanda.
NinjaUrban1 dia hoy izy:
Tsara nefa fihetsika lehibe tokony hanazavana ny antony? tsy tianao ?.
Valio amin'i NinjaUrbano1
Araka ny nolazaiko ... tsy tiako izy ireo, fa tsy midika akory izany fa tsy mitana andraikitra lehibe ho an'ity na ho an'ny mpampiasa izy ireo ary / na izy ireo no distro tiako kokoa ho an'ny sehatra X, tsy tiako fotsiny izy ireo ary navoakako izany ... aleoko mifantoka amin'ny distro tsy miankina ... Averiko ihany, manatanteraka ny andraikiny izy ireo ary tsara izany, saingy tsy ho ahy izy ireo ary mino ahy fa efa nanandrana maro (ho an'ny tanjona ara-panabeazana) aho, ohatra izao dia manoratra avy amin'ny Ubuntu 12.04 aho ary nihatsara be izany ka mikasa ny hametraka azy amin'ny solosainan'ny vadiko aho.
Ny tiany dia tsiro ary ity no GNU / Linux.
Miarahaba anao am-pitiavana.
Mamelà ny fihoaram-pefy.
Juanshu dia hoy izy:
Efa manantena ny distro sinoa aho Linux Deepin 12 tena tsara!
Valiny tamin'i Juanshu
Tsy andrasako foana ny kinova KDE, fa ny marina dia tsy mikasa ny hanavao aho ka angamba manana fanavaozana linux mint 15 amin'izao fotoana izao dia salama amin'ny linux mint 13 KDE aho. Maya
joseferchozamper dia hoy izy:
Mpampiasa Windows aho, saingy nametraka distro linux maromaro aho ary miverina amin'ny windows foana. Tsy fantatro izay mitranga fa mahita fahasahiranana marobe amin'ny linux foana aho na dia nahavita nanamboatra bebe kokoa na kely aza izay ilaiko. Mametraka ny Mint 13 aho izao, matoky aho fa afaka mampiasa azy tsara, te-hivezivezy amin'ny programa video sy feo fotsiny aho ary hanoratra ny My Writings ho an'ny bilaogiko.
Enga anie Andriamanitra hitahy sy hanome hazavana hatrany mba hahasoa ireo mpampiasa mahazatra toa ahy sy ireo maro hafa ireo tetikasa ireo.
Valiny tamin'i Joseferchozamper
Tsy fantatro izay efa niainanao taloha fa miaraka amin'ny distro toa ny Linux Mint azo ampiasaina ho an'ireo mpampiasa tsy teknika, raha ny tena izy dia mikendry ny ho distro azo ampiasaina sy maharitra ho an'ny fanjifana betsaka ho an'ireo olona tsy manana fahaiza-manao informatika.
Raha tsy mody milaza aho fa ny tranga Joseferchozamper dia mitovy amin'ilay hotantaraiko, misy ny fahazarana lehibe avelan'ny fomban'ny Windows manao zavatra. Ny fizarana tena mora toy ny Linux Mint ho an'ny olona sasany dia fiolahana fianarana somary maharary, noho ny zava-misy tsotra TSY ny Windows, izay indraindray koa eo anelanelan'ny kinova amin'ilay rafitra iray ihany.
Ny olana iray hafa dia ny tsy fahatakarana zavatra tsotra momba ny GNU / Linux dia tian'izy ireo hitondra tena mitovy amin'ny Windows ary (ohatra) manana programa mitovy amin'ny nampiasain'izy ireo taloha: Miady amin'ny divay izy ireo hametrahana messenger, nero, birao, sns, manapaka zavatra iray izy ireo ary mihasarotra ny raharaha. Na raha tsy izany, avy hatrany amin'ny faka izy ireo satria ao amin'ny windows ianao no administratera default (saika tsy misy olona manana olana amin'ny famoronana kaonty raha tsy misy fahazoan-dàlana avo lenta, ka tsy misy fanao) sy masinina veloma.
Misaotra betsaka amin'ny fanehoan-kevitra, manantena izahay fa hanohy hamaky eto 🙂
Amboarina Pixel Cup: lalao maimaimpoana eo am-pelatananao
Adika amin'ny bara fizika ao amin'ny terminal misy gcp